I-diep.io (aka tank.io ye-iphone) uphononongo, amaqhinga kunye nesicwangciso: le yinto entsha yokulutha emva kweslither.io
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo IDiep.io (aka Tank.io ye-iPhone) uphononongo, amaqhinga kunye nesicwangciso: le yinto entsha yokulutha emva kweSlither.io
Emva Agar.io , smash hit yango-2015, yeza Isilayidi eyathatha umhlaba ngoqhwithela ngo-2016.
I-apos ibe ziinyanga nje ezimbalwa ngoku kwaye umdlalo omtsha kraca uye wavela kwi & apos dot io 'boom esiyithandayo: I-Deep.io (aka Tank.io ye-iPhone kunye ne-iPad) yinto enkulu elandelayo enokuthi Eclipse zombini uSlither.io kunye noAgar.io.
Kutheni sicinga njalo?
Kuqala, ziingcamango ezifanayo: dlala kwi-browser yakho okanye nge-app ye-iOS. Ukuba udlala ngesikhangeli sakho, awudingi ukufaka nantoni na, ufaka nje igama lakho kwaye uqale ukudlala, ngokulula njengaleyo. I-Deep.io ikwabonisa indawo efanayo yabadlali abaninzi evulekileyo njengeSlither.io
Imithetho yeDiep.io ilula: uhambahamba usebenzisa ikhibhodi yakho kwaye udubule ngokunqakraza kwiqhosha lasekhohlo le mouse (ukuba udlala kwidesktop). Ngaba kulula ngokuchanekileyo?
Ewe, hayi ngokukhawuleza: uneendlela ezininzi zokukhulisa itanki yakho kwaye ekuqaleni uyakube udubula amasuntswana adadayo kwilizwe: izikwere ezityheli zikunika amanqaku amancinci, emva koko unonxantathu obomvu ngamanqaku ambalwa. kwaye iipentagon ezihlaza okwesibhakabhaka ziya kunikela ngesixa esikhulu samanqaku.
Ke zithini izicwangciso zophuhliso ezinokubakho? Kubonakala ngathi zimbini iindlela zokuqala ukuphuhlisa itanki lakho: njengompu, okanye njengegusha.
Nazi izakhono ezisibhozo onokuthi uziphucule:
Zonke ezi zinto ziyazichaza, mhlawumbi ngaphandle kokonakala komzimba okwelo candelo onokuthi uliphucule kwaye ungangqubana nje nezinye izinto ezenza umonakalo kuzo.
Indlela yokuba yeyona tanki inkulu eDiep.io: amaqhinga kunye nesicwangciso
Ke uphumelela njani kwiDiep.io? Ewe, azikhawulezi njengoko usenza kwiSlither.io, kodwa ziyonwabisa kakhulu.
Mnye umthetho jikelele kuDiep.io lowo uchasene ngqo neSlither.io: SUKA KUKHONA kubakhulu. Ubuncinci ekuqaleni, xa ubuthathaka, kodwa naxa usiba mkhulu, ukulwa nezinye ezinkulu kuphela kwendlela yokufa.
Sizandlala iindlela ezimbini ezijolise kwiindlela ezimbini ezahlukeneyo
# 1:Ram kwizinto
Bulala amasuntswana kunye nezinye iitanki ngokuramming kuzo (sebenzisa umonakalo woMzimba!)
Ukutshabalalisa izinto ngomzimba wakho, ungagxila ekubekeni amanqaku kwisakhono 'somonakalo womzimba'. Isicwangciso apha kukudubula amasuntswana ngompu ude ufike kwinqanaba le-5. Ngelo xesha, unokongeza amanqaku kumonakalo woMzimba, kwiindidi zempilo kaMax kunye nezeMpilo. Ukuba unempilo eyoneleyo kunye nokonakala komzimba, ungaqala ukwenza i-ramming kwizinto ezinomsindo ngakumbi. Oku kuyakuyinciphisa impilo yakho, ke siyacebisa ukuba uqhubeke nokwenza uphuculo lwe-Regen yakho kunye ne-Max impilo yeenotshi, kodwa emva koko ujolise ngokukhawuleza ekuphuculeni isantya se-Movement.
Ezi ziindidi ezine eziphambili onokuzisebenzisa ukwenza itanki yakho ibe ngumatshini okhawulezayo nobulalayo oqubisana nezinto. Sincoma ukuba uqhubeke nokudubula umpu wakho kwaye udibanise inqaku okanye amabini kwisantya sebhulethi kunye nomgangatho weembumbulu ukomeleza abachasi ekucingeni ukuba uluhlobo lweTanki. Ngale ndlela baya kukuvumela ngokulula ukuba usondele xa ungabothusa ngokubamanyanisa ngokupheleleyo.
Esi sisicwangciso esihle sokuphumelela ngokuchasene neetanki ezincinci neziphakathi, kodwa xa usilwa nekhulu, uya kubona ukuba kunzima kakhulu ukusondela kubo ukonakalisa umzimba. Kungenxa yoko le nto esi sicwangciso sisetyenziswe kakuhle ngokuchasene nabachasi abancinci nabaphakathi.
Ungandigqitha, kodwa awungekhe ugqithe umpu wam
Emva kokonakala komzimba, isakhono sethu sesibini esithandayo ekuphuculeni isantya seBullet. Ukudubula itoni yeembumbulu ezikhawulezayo ngokuqinisekileyo kuya kubadida abachasi bakho kwaye kuya kwenza okuhle ekuqaleni xa ufuna ukufikelela kwinqanaba eliphezulu ngokukhawuleza. Hlanganisa oku kunye nokungena kwebhulethi kunye nokuphuculwa komgangatho weTanki yeMipu, kwaye thina & apos sibonile impumelelo enkulu ngokudibanisa.
Ngokubanzi, iDiep.io ngumdlalo omlutha kakhulu onenkqubo ecothayo yokuphuhla kuneSlither.io, kodwa kukonwabisa kakhulu. Ukuba neendlela ezahlukeneyo zokuphucula itanki yakho kunye nezakhono ezahlukeneyo zokuphuhlisa zikwenza ukuba wongeze umbono othile kuphuhliso lomdlalo. Ekupheleni kosuku, umdlalo weqonga kwiDiep.io unamandla kakhulu. Ukucofa imouse rhoqo / ukucofa yingoma yengoma eqhubekayo kumdlalo wokudlala okhawulezayo nonamandla. Ukuba udiniwe kukutya ezinye iinyoka, iDiep.io ngokuqinisekileyo yinto entsha eya kuthi ibonelele ngeendlela ezahlukeneyo zomdlalo. Siza kukulinda ebaleni!
Khuphela Itanki.io ye-iPhone kunye ne-iPad (Unxibelelwano lweVenkile ye App) okanye yidlale kwisikhangeli sakho kwiDiep.io * Gcina ukhumbula ukuba akukho luhlobo lwaseburhulumenteni lweDiep.io olusebenzayo. I-Tank.io yindawo eyenziwe kakuhle, kodwa ayingomdlalo wokuqala. Asifumananga naluphi na uhlobo oluhle lomdlalo we-Android.
Ilula kwaye kulula ukuyifunda
Umlutha kakhulu ngohlaziyo kunye nenkqubo enobunzima ngakumbi kuneSlither.io kunye ne-Agar.io
Uninzi lwamathuba okwenza ngokwezifiso itanki yakho
Akukho nguqulo ye-Android okwangoku, akukho nguqulo ye-iPhone isemthethweni (kodwa iklone elungileyo iyafumaneka)
Ngaba kunokuba laggy ngamanye amaxesha
Wena & apos; bhetele uyidlale kwiscreen esikhulu / kwidesktop
ngolwesihlanu omnyama 2017 e & t
I-iphone 7 kunye ne-arena yefowuni
I-Apple iya kunyanga i-iPhone 6 Plus 'isifo seTouch' nge $ 149
Eyona nto ithengwayo yokuthenga: Thenga i-Samsung Galaxy S7, fumana imemori khadi ye-256 GB yasimahla
Isamsung ineentloni yokususa i-headphone jack kwiNqaku le-10
Uhlaziyo lwe-Android Nougat lweMotorola Droid Turbo 2 (aka Moto X Force) eqinisekiswe yiBluetooth SIG
Uvavanyo olusebenzayo lweSamsung ye-Samsung S5
NgoLwesihlanu omnyama, i-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 edge iza neefowuni zeGear VR zamahhala